Kalfadhiga 6-aad ee baarlamanka oo dib loo dhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
15th April 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Kalfadhiga 6-aad ee baarlamaanaka federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu weday inuu furmo 20-ka bishaan ayaa dib u dhacay ilaa 27-ka isla bishaan April 2015.
kulan maanta ay xaruntooda Villa Hargaysa ku yeesheeen Xubnaha gudiga Joogtada ah ee Baarlamaanka oo uu shir godoominayey godoomiyaha barlamanka, Maxamed Sheikh Cusmaan Jawari ayaa lagu sheegay in dib u dhacu ku yimid arrimo farsamo awgood.
Gudiyada joogtada ah ayaa sidoo kale ugu baaqey xubnaha golaha baarlamaanka ee safarada dibada ah ku maqan iney sida ugu dhaqsiyaha badan dalka dib ugu soo labtaan isla markaana furitanka kalfadhiga 6-aad ka soo qeyb galaan.
Kualnka gudiyadda joogtada ah ee baarlamaanka markii uu soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay ku xigenka xoghayaha joogtada ah ee barlamanka Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Ciyow .
“Waxaa kulanka gudiga joogtada ah diirada lagu saaray furitaanka kalfadhiga 6-aad ee baarlamaanka, runtii si aad u wanaagsan ayaa looga dooday howshaas waxaana ka isla gartay in 20 bisha oo balanku ahaa in uu furmo uusan suura galeyn, waxaana loo dhigay 27 ka April marka waxaa laga codsaday mudanayaasha in ay waqtigaas ku yimaadaan” ayuu yiri Ciyow.
Kalfadhiga 6-aad ee barlamanka federalka ah ayaa markii uu furmo waxaa mudanayasha Golaha shacabka hor yaala ajandayaal fara badan oo u baahan in wax laga qabto.